Musharrax Cali Xaaji Warsame oo war qoraal ah soosaaray, kadib markii maanta musharraxiin kale ku shireen Garoowe. – Radio Daljir
Musharrax Cali Xaaji Warsame oo war qoraal ah soosaaray, kadib markii maanta musharraxiin kale ku shireen Garoowe.
Diseembar 4, 2018 6:04 g 0
Musharrax Madaxweyne Puntland Cali Xaaji warsame ayaa maanta soo saaray warsaxafadeed uu kaga hadlayo khilaafka Madaxda Puntland iyo Guddiga xalinta Khilaafadka doorashooyinka Puntland.
Hoos ka akhriso Warsaxafadeedka Cali Xaaji Warsame
Ujeeddo: Guddiga Xallinta Khilaafaadka
Baarlamaanka PuntlandGuddiga xallinta khilaafkaadku wuxuu muhiim iyo lafdhabar u yahay hanaanka doorashada Puntland.
Waxaa hubaal ah in Puntland ay ku jirto xilli xasaasiah ayna taagan tahay isgoys aad khatar u ah, loonabaahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirkadadka Puntland.
Waxaan Madaxweynaha Puntland uga fadhinaainuu wadatashi buuxa kala sameeyo magacaabiddaguddigaas muhiimka ah dhammaan hay’adahaay qusayso, ayna ka mid yihiin musharaxiinta kuloolamaysa doorashada Puntland.
Khilaafka soo kala dhexgalay golaha xukuumaddagaar ahaan Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, waaqayb ka mida la-tashi la’aanta iyo awood maroorsigaMadaxweynuhu samaynayo, asaga oo guddigaas ku
soo daray shaqsiyaad xafiiskiisa ka tirsan.
Waxaan hoosta ka xariiqaya in aanu jirin wax qoraal ahoo aan weli qayb ka ahay, kaas oo ku aadan khilaafkaguddiyada iska soo horjeeda.
Waxaan ku talinaya in musharixiinta xilka
Madaxweynanimo ee Puntland ay arrintaas ka
yeeshaan talo iyo go’aan midaysan.
Ugu danbayntii waxaan ugu baaqaya isimada Puntlandin ay magacaabidda guddiga xallinta khilaafaadkabaarlamaanka il gaar ah ku hayaan, kana qaataandowrkooda shariifka ah.
Musharraxa Xilka Madaxweynaha Puntland 2019
Ololaha Doorashooyinka Puntland - Cali Xaaji 2019 41 Wararka 17309
Shir looga arrinsanayo dagaalka kadhanka ah Alshabaab oo kismaayo ka furmay (Sawiro)